Peace Education ူမန်မိာိုံင်ငံရြိဖြံ Cle ္ဘဖြိးတိုးတက်မြအတကြ်၊
ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေး Global Knowledge Clearinghouse
Peace Education Global Knowledge Clearinghouse သည်္ဘငိမ်းခpeaceမ်းရေးအတငြ်းရြိ္ဘငိမ်းခlargestမ်းရေးတည်ဆောက်မြအဖြဲ is ူဖစ်သည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၊ သတင်း၊ သုတေသန၊ အစီရင်ခံစာများနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့မှငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ ၀ င်များမှခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသောအချက်အလက်များပါရှိသည့် Clearinghouse သည်သုတေသီများ၊ မူဝါဒချမှတ်သူများ၊ အလှူရှင်များနှင့်ဗဟုသုတအချက်အချာဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်။
အဆိုပါ Clearinghouse အသုံးပြုခြင်း
ရှာဖွေနိုင်သော / စီစစ်နိုင်သောစစ်ထုတ်စက်များ
Clearinghouse ကိုစာသားအကွက်ကိုအသုံးပြုပြီးပွင့်လင်းသောရှာဖွေမှုတစ်ခုမှသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သင်ရှာဖွေနိုင်သောနှင့်စီစစ်နိုင်သော filter သုံးခုကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ရွာလုိ႔ရသည့္အမ်ဳိးစားမ်ား အရင်းအမြစ်အမျိုးအစားကိုဖော်ပြရန်။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ၊ သတင်းများ၊ အစီရင်ခံစာများ၊ ထင်မြင်ယူဆချက်နှင့်သုတေသနများအပါအဝင်အဓိကအမျိုးအစား ၂၀ ခန့်ရှိသည်။
Tags: အရင်းအမြစ်များ၏အာရုံစိုက်ဖော်ပြရန်။ အများစုမှာ entries တွေကိုအများအပြား tags များပါလိမ့်မယ်။ ယခုလက်ရှိတွင်လူ့အခွင့်အရေးမှ # ပြောင်းလဲခြင်းသင်ယူခြင်းအထိ #youth ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သူများအထိခေါင်းစဉ်ပေါင်း ၇၀၀ ကျော်ရှိသည်။
တိုင်းပြည် / ကမ္ဘာ့ဒေသကြီး တိုင်းပြည်၊ နိုင်ငံများသို့မဟုတ်သယံဇာတအရင်းအမြစ်၏အဓိကနေရာကိုဖော်ပြသည် ကမ္ဘာ့ဒေသများသည် CAPS အားလုံးတွင်ရှိသည်။
လက်ရှိတင်သွင်းမှု ၁၈၀၀ နီးပါးရှိပြီးလစဉ်အရင်းအမြစ်အသစ် ၃၀-၅၀ ထပ်တိုးသည်နှင့်အတူ Clearinghouse သည်တိုးချဲ့နေသည်။ အဆိုပါ Clearinghouse လည်းတိုးတက်မှုအတွက်အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စေတနာ့ ၀ န်ထမ်းအဖွဲ့သည်ဒေတာဗေ့စ်အားရှာဖွေရေးနှင့်သုတေသနပြုသူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အဓိကအကြောင်းအရာများနှင့်နိုင်ငံများနှင့်ပါသောဆောင်းပါးများကို "တံဆိပ်ကပ်ရန်" ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေသည်။ ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့အထိကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာစုဆောင်းမှု၏ထက်ဝက်နီးပါးကို“ မှတ်သား” ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာအသစ်များထည့်ရန်ကူညီရန်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေသည် (ကျွန်ုပ်တို့တွင်အရင်းအမြစ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ထည့်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်) အကယ်၍ သင်သည်ဤစီမံကိန်းကိုလုပ်အားပေးလိုပါကအခြေခံ ၀ က်ဘ်ဆိုက် (wordpress) အတွေ့အကြုံရှိပါက၊ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်.
ငြိမ်းချမ်းရေးပညာရေးအတွက် Global Campaign သည်အဖွဲ့ ၀ င်များအားသတင်း၊ သုတေသန၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းများ၊ ဤပံ့ပိုးမှုများကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည့်အပြင်၎င်းတို့အား Campaign ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်မျှဝေမည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အီးမေးလ်စာရင်းများမှတဆင့်ဖြန့်ဝေပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ဖော်ပြလိမ့်မည်။ သင်၏အရင်းအမြစ်များကိုမျှဝေရန်နှင့် Clearinghouse ကိုအထောက်အကူပြုရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ.
တိုင်းပြည် / ကမ္ဘာ့ဒေသကြီး